Indlu yelizwe eliRustic--igadi yabucala kunye nemibono yolwandle
Le ndlu inoxolo, netofotofo, ehlala abantu aba-6, ibekwe ngokulula nje umgama wemizuzu emi-2 ukusuka kumbindi wedolophu, ekufikeleleni ngokulula eBordeira naseAmado Beaches-ezimbini zezona lwandle zintle ePortugal--kunye umgama omfutshane ukusuka kwiindlela ezininzi zokuhamba, kubandakanywa ne "Fishermen's Trail" inxalenye ye "Rota Vicentina" edumileyo. Ukuba ujonge esona siqalo sigqibeleleyo solwandle okanye iholide yokuhamba intaba, okanye ufuna nje ukubaleka kuyo yonke, le ndlu yeyakho!
ICasa da Onda ikwisitrato esithe cwaka, esinesiphelo esijongene nonxweme lwaseBordeira. Le ndawo kukuhambo olufutshane ukuya kwindawo enqabileyo, ehlanjwe mhlophe yedolophu yaseCarrapateira kwaye inika ukufikelela ngokulula kwezinye iilwandle ezilungileyo ePortugal ngelixa uhlala ubucala kwaye uzolile. Umphambili wendlu--enepatio apho unokuhlala khona, uphumle, okanye ukonwabele nje umbono-ujonge intlambo yeCarrapateira kunye neBordeira Beach. Ngasemva, kukho igadi ethandekayo, yabucala, enomthunzi ene-bougainvilla, izityalo ezidubulayo, kunye nemithi yeziqhamo. Kukho itafile kunye nezitulo zokuphumla kunye nokutya, kunye ne-bbq yokulungiselela ukutya kwakho ekuzoleni kwegadi. ICasa da Onda yindlu enemigangatho emibini enamagumbi okulala amathathu phezulu; i-salon enesitovu sokutshisa iinkuni kunye nesofa; Indawo yokutyela enezihlalo ezi-6, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (isitovu kunye ne-oveni, ifriji enobungakanani obupheleleyo, itoaster, umenzi wekofu, imicrowave), kunye negumbi lokuhlambela elisezantsi (elinomatshini wokuhlamba). Ukusuka kwiifestile zangaphambili, unokubukela ukutshona kwelanga phezu kwamawa eBordeira Beach. Le ndlu ithatha abantu abadala abathandathu okanye abantwana: igumbi lokulala elikhulu elinendawo yokulala enentofontofo, eguquguqukayo eguquguqukayo ye-futon ephindwe kabini, ishelufu, kunye nendawo eninzi yeofisi; igumbi eliphakathi (indawo enkulu eqhelekileyo phezulu kwizinyuko) kunye neebhedi ezi-2 ezikhululekile, eziguqulwayo ze-futon enye; kunye negumbi elincinci elahlukileyo elineebhedi ezi-2 ezitofotofo, eziguqulwayo ze-futon enye. Ibhedi ephathwayo kunye nebhedi eyongezelelweyo yomntwana omncinci ziyafumaneka. Onke amagumbi okulala aneefestile zawo zesilingi kunye nokukhanya okuninzi. Kukwakho ne-TV elungele i-WIFI enoqhagamshelwano ngesathelayithi, isidlali-DVD (kunye neeDVD), isitiriyo somculo kunye nethala leencwadi lomculo. I-WIFI iyafumaneka. Isaphulelo sisetyenziswa kwirenti yeveki nangenyanga.
4.81 ·Izimvo eziyi-31
Ukusuka kwi-patio yangaphambili kunye nayiphi na ifestile okanye umnyango ophambi kwendlu, unokujonga intlambo kunye nePraia do Bordeira. Unokuhlala apho ngokuzolileyo ubukele amaza okanye ilanga litshona emva kwamawa onxweme olungaphantsi kwakho. Igadi engasemva ebiyelweyo, enezihlahla zayo ezineentyatyambo kunye nemithi yeziqhamo, yindawo egqibeleleyo yokuphumla, ukufunda incwadi, ukuthatha "siesta", okanye ukupheka ibbq! Indawo ekwiPaki yeNdalo ekhuselweyo yaseMazantsi-ntshona ye-Alentejo kunye neCosta Vicentina iyishiyile indawo ingonakaliswanga luphuhliso kwaye ibonelela ngeendlela ezininzi zokuhamba intaba ukonwabela ubuhle bendalo balo mmandla. La Rota Vicentina, i 340 km. uthungelwano lweendlela zokuhamba, kubandakanya i-10 km. isiphaluka e Carrapateira. Indawo yendlu iyenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yolwandle olungaqhelekanga okanye iholide yokukhwela intaba, okanye ukunxibelelana nendalo kunye nawe! "Ummandla ... ukhala ukuba uphononongwe kwaye unconywe. Ukusuka kwiindawo eziphakamileyo zengxondorha, ukuya kwihlathi le-rustic elidityanisiweyo kunye neefama ezisebenza ngokupheleleyo, uya kuziva umgama oziikhilomitha kude nesiphithiphithi sobomi bemihla ngemihla. Ukuba oko akunjalo " Okoneleyo, ungasoloko uzama isandla sakho ekusefeni, kwi-wind-surfing, kunye nokukhwela umzimba, imidlalo apho amaza angena kuLwandlekazi lweAtlantiki ayilungele. Kodwa 'ilanga, i-surf kunye nesanti' zikude nesiphelo sebali le-Algarve; akukho kunqongophala kwezinye izinto ezinomtsalane - imisebenzi, iibhari zaselwandle (kunye nee-disco), iinqaba (zombini isanti kunye nezenyani), ukuntywila, ukonwatyiswa, ulonwabo… Ukanti iAlgarve eselunxwemeni 'yithontsi elwandle' kuye nawuphi na umkhenkethi. IAlgarve emnandi yangaphakathi izidla ngokuba needolophu ezintle zeenqaba kunye neelali ezinembali, i-cork tree- kunye neenduli ezigqunywe ziintyatyambo, kunye nezilwanyana zeentaka.
(umbhalo othatyathwe ku-(URL HIDDEN) ICarrapateira, ngokwayo, ibonelela ngeekhefi ezininzi kunye neendawo zokutyela, ezinye kwiplaza enkulu, apho unokuphumla kwaye wonwabele izimuncumuncu, isidlo, okanye izimuncumuncu zesiPhuthukezi! Ukuba ujonge imincili engaphezulu ILagos imalunga nemizuzu engama-40 kwaye maninzi amathuba okubona indawo, ukutya, ubomi basebusuku, kunye namathuba ezemidlalo e-El Algarve. IParque de Floresta Golf & Leisure Resort apho umntu anokubetha khona iibhola ezimbalwa zegalufa, asebenzise indawo yokuzivocavoca okanye asebenzise amaziko ezemidlalo kuphela imizuzu-20 drive e Vale do Poco, Budens.
Ndihlala ngaphandle kweMadrid, eSpain kwaye ndiyafumaneka kuwe ngale webhusayithi ukuze uphendule ii-imeyile zakho, wenze ugcino lwakho, kwaye ndikunike naluphi na ulwazi onokulufuna. Nangona kunjalo, ngenkonzo yamehlo, uLa Senhora Filomena uyafumaneka ukuze akubulise kwaye aphendule kuzo naziphi na iingxaki onokuba nazo. Ndiya rhoqo eCarrapateira, ngoko ke kunokwenzeka ukuba iindlela zethu ziya kuwela!
Ndihlala ngaphandle kweMadrid, eSpain kwaye ndiyafumaneka kuwe ngale webhusayithi ukuze uphendule ii-imeyile zakho, wenze ugcino lwakho, kwaye ndikunike naluphi na ulwazi onokulufu…
Inombolo yomthetho: 44080/AL
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R3427